Wiilasha dagan: howlaha iyo waajibaadka | Fardaha Noti
Jenny monge | | Fardo, Xeryaha
Wiil xasilloon waa kan yaa waxay daryeeshaa daryeelka iyo fayoobaanta sinnaanta. Shaqadaadu waa inaad ilaaliso caafimaadka xoolaha oo aad ku haysaa xaalad wanaagsan.
Daryeelka farduhu wuxuu ku lug leeyahay labadaba xayawaanka iyo xeryaha ay ku seexdaan, ku cunaan kuna jimicsadaan. Soo koobiddu waa shaqo daboolaysa dhammaan baahiyaha sinnaanta.
Miyaynu qoto dheer qodnaa?
U hibeynta naftaada inaad noqoto wiil deggan waxay ka dhigan tahay shaqo adag iyo saacado badan, inkasta oo loogu talagalay kuwa jecel faraska Waxay noqon kartaa xirfad wax ku ool ah sababtoo ah xiriir maalinle ah oo lala yeesho xayawaanadan quruxda badan.
Waxaa jira wiilal badan oo xasiloon oo bilaaba shaqadan xirfadeed iyagoo da 'yar oo ku dhowaad si caadi ah, dhammaadka usbuuca ama xilliyada xagaaga, iyagoo ku daraya daraasadaha tusaale ahaan.
Wadamada qaarkood, sida Ingiriiska oo kale, inuu noqdo wiil deggan shahaado rasmi ah ayaa loo baahan yahay. Este xaalku ma aha Spain, sidaa darteed haddii aad ku fikireyso inaad noqoto waardiye ama gabar xasilloon waxaad awoodi doontaa inaad ka hesho maqaalkan awoodaha uu qofku yeelan karo waxaadna awood u yeelan doontaa inaad aragto nooca shaqooyinka ay ka qabtaan xirfaddan. Iyo haddii, liddi ku ah, waxa aad xiiseyneyso inaad wax yar ka ogaato xirfaddan iyada oo aan la gaarin dhamaadka inaad fuliso, waxaad sidoo kale heli doontaa xog badan oo xiiso leh. Aan tagno halkaas!
1 Muxuu yahay wiil xasilloon oo masuulka ka ah?
1.4 Dayactirka qalabka
2 Xirfado noocee ah ayuu yeelanayaa wiilka deggan?
3 Sidee loo noqdaa wiil xasilloon?
Muxuu yahay wiil xasilloon oo masuulka ka ah?
Aroosyada ama gabdhaha xasilloon ayaa ah dad loo kireystay inay daryeelaan fardaha shaqsiyaadka, beeraha faraska, iwm. Sidaa darteed waxay ka shaqeyn karaan meelo kala duwan iyo daryeelida fardo, iyadoo loo eegayo astaamaheeda ama shaqadeeda, marka lagu daro baahiyaha aasaasiga ah ee kalluun kasta, baahiyo gaar ah.
Dadka u heellan iska ilaali fardaha showgaCaadi ahaan waxay raacaan xayawaanka, waxay u xanaaneeyaan tartan, iyaga oo ku xardha ama goynaya manishooda tusaale ahaan. Xaaladahan badiyaa waa shaqo waqti buuxa ah, iyo xitaa mararka qaarkood waxay la wadaagaan milkiilayaasha milkilayaasha. Arrin aad muhiim ugu ah kiisaskan ayaa ah inay jimicsadaan faraska illaa iyo inta uu fuushan yahay.
Sidaa darteed waxay tilmaamaysaa a takhasus weyn iyo u heellan daryeelka fardaha tartanka, Maaddaama wiilasha xasilloon ay leeyihiin door aasaasi ah guusha faraska iyo fuulitaanka.
Aroosadu sidoo kale way shaqeyn karaan beeraha fardaha, Daryeelka fayo-qabka xayawaanka, marsooyinka iyo lo'da. Kuwa ka shaqeeya meelahaan caadi ahaan uma fuulaan xayawaanka si ay ugu jimicsadaan. Hawsha kale ee ay yeelan karaan ayaa ah ka caawi dhakhtarka xoolaha sidii uu u daryeeli lahaa foalsooyinka ama u dhaqaajin lahaa.
Sida la arki karo, kiiskan dambe, wiilasha xasilloon ayaa sidoo kale la macaamila kuwa takhasuska leh ee la xiriira adduunka fardaha, sida dhakhaatiirta xoolaha. Ku dar sidoo kale la macaamil macallimiinta fuushan iyo kuwa kalluumeysiga ah taas oo ka dhigaysa fardaha xayawaanka inay cabiraan.
Wixii yar ee aan ilaa hada aragnay, shaqada wiil dagan ayaa lagu soo koobi karaa taas waxay daryeelaan daryeel maalmeedka fardaha. Haddaba, waa maxay daryeelka kuwaasi? Qofka loo yaqaan 'equine' wuxuu ubaahan yahay inuu kujiro sheeko nadiif ah, inuu gogosha loo diyaariyo, la cadeeyo oo la nadiifiyo, lana siiyo cunno iyo biyo, wuxuu u baahan yahay daryeel caafimaad waqti ka waqti iyo waliba jimicsi.
Aynu ku eegno dhammaan baahiyahan si yar oo faahfaahsan:
Ka dib markii Equine uu u baxay inuu jimicsi sameeyo, caruusku waa inuu nadiifiyaa oo ah dhiiqo iyo siigo, oo lagu daray cadeeyay Markii loo baahdo, iyaguna waa inay jar gowsyada.
Shaqada Ka ilaali xeryaha nadaafad iyo xaalad wanaagsan iyo dhismaha kale ee goobta, waa qodob kale oo aad muhiim ugu ah shaqada wiilasha xasilloon. Xarumaha waxaa laga yaabaa inay ka kooban yihiin bakhaarro, maxkamado, maydhasho, ama goobo jimicsi oo banaanka ah. Marka lagu daro nadiifinta quudiyaasha, dadka caba iyo diyaarinta sariiraha xoolaha, dabcan.
Waa inay siiyaan cunto ku filan fardaha, iyo sidoo kale inay hubiyaan inay biyo haystaan. Haddii aad rabto inaad waxbadan ka ogaato quudinta cunnooyinka, waxaan kugula talineynaa inaad fiiriso maqaalka: Fiitamiinnada iyo nafaqooyinka fardaha.
In kasta oo guur-wadayaasha oo dhami aysan mas'uul ka ahayn qaybtan daryeelka faraska, haddana waxaa jira kuwa badan oo la macaamila fardaha. dhaawacyo fudud xoolaha, iyo sidoo kale beddel faashadda oo maamul dawooyinka. Waxaas oo dhan waxay ku hoos jiraan tilmaamaha dhakhaatiirta xoolaha.
Sidoo kale waa inay ka feejignaadaan xayawaanaadka si ay u arkaan inay jiraan wax isbedel ah oo ku dhaca caafimaadkooda oo ay jimicsi sameeyaan marka kuwa masuulka ka ah aysan awoodin Qodob kale oo muhiim u ah caafimaadka ayaa ah isticmaalka bustayaal.
Marka lagu daro daryeelka ehellada, meeshooda nasashada, barxadaha iyo taraafikada, waxay sidoo kale mas'uul ka yihiin nadiifinta iyo hubinta xaaladda qalabka si ay ugu sii hayaan xaalad fiican.
Xirfado noocee ah ayuu yeelanayaa wiilka deggan?
Aroosadu waa inay awoodaan fuulo fardaha, si aad u awoodo inaad jimicsi ku sameyso markii loo baahdo. Waa run in kuwa ka shaqeeya xinjirooyinka aysan inta badan dusha ka saarin xayawaanka, sidaan horay uga faallaynay, si kastaba ha noqotee waxay noqon kartaa kiis go'doon ah oo ay tahay inay sidaas ku sameeyaan mar uun. Sababtaas awgeed ayaa had iyo jeer looga baahan yahay in wiilasha xasilloon ay leeyihiin ugu yaraan mid heerka fuulitaanka aasaasiga ah.
Waa inay ahaadaan dad fiiro gaar ah u leh awoodo inuu helo iyo ogaysiis isbeddellada xaaladda caafimaad xoolahaaga ku jira daryeelkaaga.
Waa inay noqotaa diyaar u ah inay ka shaqeeyaan dibadda xaalad kasta oo cimilo ah. Waa a shaqo jir ahaan u baahan halkaasoo ay tahay in lagu qabto howlaha nadaafadda ee caadiga ah tusaale ahaan, taas oo inta badan keenta ka shaqeynta bey'ado wasakh ah oo boodh leh.
Dabcan waa inay lahaadaan fikradaha aasaasiga ah ee daryeelka faraska.
Sidee loo noqdaa wiil xasilloon?
Waxaan horeyba u soo sheegnay bilowgii maqaalka in Spain shahaado rasmi ah aan looga baahnayn. Si kastaba ha noqotee, waxaa loogu talagalay in qofka la shaqaaleeyaa uu leeyahay tayada taxanaha ah ee aan ku soo uruurin jirnay tuducyadii hore. Hadday taasi tahay Waxaa jira koorsooyin lagu helo fikradaha ku saabsan quudinta iyo daryeelka sinnaanta iyo waliba furayaasha aasaasiga ah ee daawada xoolaha.
Waa run inay tahay a xirfad taas oo ah wax iska cad qiimeeyay adduunka salka ku haya, wax ka muuqda labadaba mushaharka iyo dhinaca shaqada. Mararka qaar waxaa jira xayawaan aad u tiro badan oo aroos kasta leh oo shaqaduna xoogaa culeys ku noqon karto, iyadoo ay ugu wacan tahay howlaha tirada badan ee ay xirfadlayaashani daryeelaan.
Si kastaba ha noqotee, haddii aad jeceshahay fardo waxay noqon doontaa a Xirfad aad uwanaagsan si aad u aragto inay adiga kugu xiran tahay in xayawaanku u koboc xoog iyo caafimaad leh.
Wadada buuxda ee maqaalka: Fardo Noti » Fardo » Wiilasha deggan: doorarka iyo masuuliyadaha